Thursday August 15, 2019 - 21:04:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay maamulka Jaziiradda Jabalu Daariq ayaa lagu sheegay in lasii daayay markab shidaal siday oo ay laheyd dowladda shiicada Iiraan.
Maxkamadda sare ee maamulka Jabalu Daariq oo taabacsan dalka Ingiriiska ayaa amartay in lasii daayo markabka iyo sedax kamid ah shaqaalihiisa oo uu kamid yahay naaquudaha markabka Grace1.
Saraakiisha xukuumadda Jabalu Daariq ayaa iska dhega tiray baaq kasoo baxay dowladda Mareykanka oo ahaa in aan lasii dayn markabkan oo lagu eedeeyay in uu shixnad shidaal ah u siday maamulka Bishaar Al Asad ee wadanka Suuriya.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Shiicada Iiraan ninka lagu magacaabaao Jawaad Dariif ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid dhabar jab ku ah wax uu ugu yeeray fal Burcad badeednimada oo uu qaadday dowladda Mareykanka.
Qabashadii Markabka Grace1 ee lagala leeyahay wadanka Iiraan ayaa khilaaf dhanka diblumaasiyadda ah ka dhax abuuray xukuumadda London iyo Tahraan.
Ciidamada dowladda Iiraan ayaa bishii lasoo dhaafay qafaashay markabka shidaal siday oo ay leedahay dowladda Ingiriiska balse lama oga waqtiga ay Iiraan sii dayn doonto markabka uqafaalan, dowladda Inigiriiska ayaa horay u sheegtay in ay ku biirayso isbaheysi ka dhan ah Iiraan oo Mareykanku ka hirgelinayo mandiqadda loo bixiyay bariga dhexe si loo sugo ammaanka maraakiibta ganacsiga ee isticmaala marin biyoodka Hormuz.